Amakhadi asebhange akhokhelwa kusengaphambili angenye yezindlela ezingcono kakhulu zokuthenga ku-inthanethi, ukunciphisa izindleko esifuna ukuzenza nyanga zonke ebusuku, ekuthengeni okuhlukahlukene, lapho sithatha uhambo, ekubhaliseni ... kusukela ngale ndlela, kanye Ibhalansi etholakalayo isiphelile, asikwazi ukusebenzisa okuningi, hhayi njengoba kwenzeka ...
I-TIM iwumhlinzeki wezokuxhumana wezingcingo owaziwayo wase-Brazil ohlinzeka ngezinsizakalo zocingo, kokubili iselula nezilungisiwe, ukufinyelela ku-inthanethi ngaphansi kwamanethiwekhi e-3G kanye ne-4G, kanye ne-broadband. Le nkampani njengamanje inezinsizakalo zephakeji yezwi nedatha yezinkampani ezincane, eziphakathi nezinkulu eziyidingayo.
I-PCS MasterCard iwuhlobo lwekhadi elilayishwa kabusha elikhokhelwa ngaphambili. Ngenxa yalokho uzokwazi ukwenza zonke izinhlobo zokuthenga ngokuphepha okuphelele nobumfihlo, ngoba ayixhunyanisiwe nanoma yiluphi uhlobo lwe-akhawunti yasebhange futhi itholwa ezindaweni zokuthengisa ngaphandle kokunikeza noma yiluphi uhlobo lwemibhalo noma ukubhaliswa, kuphela ehambisana ne...
Uma unqume nge-ALDI TALK futhi usunayo kakade isethi ehlinzeka ngale sevisi ngaphansi kobuholi buka-Aldi Nord no-Aldi Süd, ngokuqinisekile uyazibuza ukuthi ungaligcwalisa kanjani ikhadi lakho elikhokhelwa ngaphambili. Le nqubo ilula kakhulu, ngesikhashana nje uzokwazi ukushaja kabusha i-Aldi Talk futhi ...
Uma uphelelwa ibhalansi kuselula yakho, into yokuqala oyicabangayo ukuthi ungeza kanjani imali kulayini wocingo lwakho. Ukushaja kabusha iselula ngekhadi kungenye yezindlela ezisetshenziswa kakhulu zokwengeza imali ocingweni lwakho ngokushesha nangaphandle kwezihibe. Izinkampani zamaselula ezehlukene ezikhona emhlabeni wonke, zine...
Manje usungakwazi ukushaja kabusha iselula yakho ngewebhusayithi esemthethweni ye-BBVA, ngokufinyelela ngenombolo yakho yomsebenzisi nephasiwedi. Bese ukhetha opharetha weselula, i-akhawunti yasebhange lapho inani kanye nenani kuzoncishiswa. Kulula kanjalo ukushajwa kabusha umakhalekhukhwini we-BBVA usendaweni enethezekile noma ehhovisi lakho. I…
Shaja kabusha iselula ye-Santander
Gcwalisa ibhalansi yakho yeselula ngokushesha nangokuphephile, kusukela ekunethezekeni kwekhaya lakho, ihhovisi noma ama-ATM, ngebhange lase-Santander. Ungaphelelwa ibhalansi kulayini wakho Weselula, funda ukushajwa kabusha iselula ye-Santander lapho kukufanele khona futhi nini. Manje hamba uye emahhovisi asebhange ungasekho...
Ibhange le-ING yibhizinisi lezezimali elinikeza amakhasimende alo ahlukile izinsiza zebhange eziqondile noma ze-elekthronikhi. Ungakwazi ukushaja kabusha iselula yakho ku-ING nge-akhawunti yakho yasebhange ngokufaka ngokuqondile kukhompuyutha yakho noma kumakhalekhukhwini wakho ngokulanda i-APP. Ungenza ukushajwa kabusha kweselula ngokubhanga nge-elekthronikhi ngokufinyelela ...
ILa Caixa iyibhange elihamba phambili eSpain, elinekhono elikhulu lokuqamba izinto ezintsha futhi elihlinzeka amakhasimende alo ngekhwalithi yenkonzo. Ukushaja kabusha i-la Caixa kungenye yezinsizakalo ezisetshenziswa kakhulu ngamakhasimende. Imele isikhungo sokuqala sezimali ukunikeza lolu hlobo lwenkokhiso. Ngale sevisi, ungakwazi...